Xawaare aad u sareeya oo ka socda Istanbul ilaa Ankara | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraXilliga rikoodhka sareeya ee u dhaxeeya Istanbul iyo Ankara
17 / 08 / 2014 06 Ankara, 34 Istanbul, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
Saaxiibka xawaaraha sare ee u dhexeeya Istanbul iyo Ankara: tareen degdeg ah oo hoos u dhigaya Istanbul-Ankara saacadaha 3.5; tartanka qiimaha, iyada oo diyaarad lagu raaxeysto. Kuwa iibsada tikidhada ka hor intaan maalinta 3 safar ku tagin Ankara laga soo bilaabo 27 iyo tareenka dhakhsaha badan waxay ku socdaan heerka degaanka 95.
Mashruucyada Tareenka Xawaaraha Sare (YHT) ma ahan riyo. Mar dambe ma fogeyn. Waxaa jira safarada 12 u dhexeeya Istanbul iyo Ankara oo leh YHT iyo 6 ayaa kumanaan dad ah. Gaar ahaan adeegga tareenka si dhakhso ah, oo ganacsatada iyo injineeriyayaashu xiisaynayaan, waxay la tartamaan diyaaradaha waqtiga iyo raaxada. Waqtiyada dib-u-habeeynta dib-u-habeeynta ayaa noqday doorka cusub ee ganacsatada kuwaas oo tagaya shirar, shirar iyo waxbarasho magaalooyinka sida Eskishehir, Ankara iyo Konya. Adeegyada tareenka ee degdegga ah waxay bixiyaan xaddiga buuxa ee 95. Tareenka ka soo baxaya Istanbuul wuxuu khariidaddiisa u gudbiyaa waqti gaaban sida saacadaha 1 oo wuxuu yimaadaa saldhiga Sapanca. Tareenka, oo u socdaalay xawaare isku celcelis ah 110 ilaa koontadaas, wuxuu kordhiyaa xawaaraha 250 km ka dib Arifiye. Xitaa xawaaraha sare, tareenku si fudud ayuu u socdaalaa iyada oo aan la helin wax yar iyo dhawaaqyo. Waxaad ku raaxeysan kartaa shaahaaga intaad ku socoto xawaare km 250 ee Tareenka Xawaaraha Sare sida quraacda ee quraacda la sameeyo ka dib marka la joogo saldhiga Izmit. Markaad tikidh iibsato adoo raacaya passenger.tcdd.gov.tr iyo codsiyada TCDD mobile, waxaad tareenada ku heli kartaa fariin telefoonada gacanta ah. Tikidhada waxaa lagu dhimi karaa boqolkiiba boqol 3 haddii 50 laga bilaabo safarka la helo maalinta ka horeysa. Waxaa jira qiime dheeraad ah oo 5 ah oo laga iibsado boqolkiiba inta iibka internetka. Intaas waxaa dheer, macalinka wuxuu awood u leeyahay inuu u safriyo 27 TL qiimo jaban.
Ma laha suunka kursiga
Tareenada kuraasta waxaa loo qaabeeyey waxyaabo ballaaran oo raaxo leh, ka duwan baska iyo baska, waxaa suurtogal ah in la sameeyo safar badbaado leh iyada oo aan kursiga suunka lahayn sababtoo ah maqnaanshaha hawada.
Istanbul - Tareenka xawaaraha sare ee Ankara
Apaydaydn ayaa baaritaanno ku samaysay khadka tareenka ee Konya-Karaman